फाइभजी फोन, यस कारण नकिन्नुहोस् यो वर्ष | गृहपृष्ठ
Home प्रविधि फाइभजी फोन, यस कारण नकिन्नुहोस् यो वर्ष
on: May 20, 2019 प्रविधि
फाइभजी फोन, यस कारण नकिन्नुहोस् यो वर्ष
पछिल्लो समय फाइभजी स्मार्टफोनको विषयमा चर्चा तथा चासो बढेको छ । यो स्मार्टफोनका विशेषताबारे उपभोक्ताको जिज्ञासा पनि उत्तिकै छ । यस्तै अहिलेको समयमा फाइभजी स्मार्टफोन कति महत्त्वपूर्ण छ भन्ने विषयमा पनि बहस हुने गरेको छ ।
मोबाइल इन्टरनेट कनेक्टिभिटी प्रविधिको पछिल्लो (पाँचौं) पुस्ता हो फाइभजी । तीव्र गतिको यसले इन्टरनेटमार्फत हुने सबै काम चुस्त रूपमा सम्पन्न गर्न सकिन्छ । फाइभजीले विस्तृत र स्थिर नेटवर्क कायम रहने दाबी गरिएको छ ।
विज्ञहरूका अनुसार शुरूमा फाइभजी उच्च गुणस्तरका सामग्री प्रसारण गर्न सक्षम हुनेछ । लाइभ स्पोर्ट्स र क्लाउड गेमिङमा शौख हुने दर्शकका लागि यसले उत्कृष्ट सुविधाको महसूस गराउनेछ । यसबाहेक टाढाबाट सर्जरी र होलोग्राफिक भिडियो कल स्तरीय बनाउन पनि यसले टेवा पुग्ने भनिएको भनिएको छ ।
विश्वमा फाइभजीको विकास तथा परीक्षण लामो समय अघिदेखि भइरहेको थियो । यद्यपि यसको व्यावसायिक उपयोग भने हालै शुरू भएको हो । गत महीना मात्र अमेरिका र कोरियाले यो सेवाको शुरुआत गरिसकेका छन् ।
यस वर्ष धेरै स्मार्टफोन निर्माताले पनि फाइभजी फोन सार्वजनिक गर्ने तयारी गरेका छन् । यस्तोमा यस वर्ष फाइभजी फोन किन्ने कि नकिन्ने भन्ने द्विविधा उपभोक्तामा देखिएको छ । यहाँ फाइभजी फोन नकिन्न तीन कारण उल्लेख गरिएको छ :
१. यसरी फेरिनेछ फोन
फाइभजी पूर्णरूपमा विस्तार भएमा निकै तीव्रगतिमा ट्रान्सफर सम्भव हुनेछ । यसले तीव्र गतिमा रियल टाइम एपले राम्रो परफर्म गर्न सक्छ । भीआर, एआरका एपहरूको विस्तार हुनेछ । तर यसका लागि कम्पनीहरूले आफ्नो फोनमा धेरै किसिमको परिवर्तन ल्याउनु जरुरी हुन्छ । यस किसिमका स्मार्टफोन कम तौल, धेरै मोटो र कमजोर ब्याट्रीयुक्त हुनेछ ।
फाइभजी फोनका लागि फरक किसिमको मोडेम आवश्यक हुन्छ । फाइभजी कनेक्शनका लागि धेरै एन्टेना चाहिन्छ । त्यसैले स्मार्टफोन मोटो हुन सक्ने देखिएको छ ।
सामसुङको कुरा गर्नुपर्दा एस१० फाइभजी स्मार्टफोन अर्को एस१० मोडलभन्दा मोटो छ । यसमा फाइभजीको हार्डवेयरको प्रयोग गरिएको छ । साथै यसमा ठूलो ब्याट्री छ । सन् २०२० सम्म यस किसिमका स्मार्टफोन केही गह्रौं र मोटा नै हुनेछन् ।
२. नेटवर्क बन्न बाँकी
फाइभजीका उच्च फ्रिक्वेन्सी सिग्नल हुन्छन् । तर अहिलेसम्म जहाँ यसको परीक्षण गरिएको छ, त्यहाँ सिग्नल रोकिने समस्या आइरहेको छ । यसले मिलिमिटर वेभमा आधारित रहेर काम गर्छन् । यो फ्रिक्वेन्सी फोरजी एलटीईको तुलनामा १० देखि १०० गुणा उच्च हो । यसले सन् २०१९ भित्र नयाँ फाइभजी फोनका लागि नेटवर्क तयार नहुने देखिन्छ । यसका लागि कम्पनीले उल्लेख्य लगानी गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
३. सही समयको प्रतीक्षा
सन् २०१९ मा यो प्रविधिको कुनै डिभाइस आउन सक्ने सम्भावना कम छ । यसका लागि केही समय प्रतीक्षा गर्नुपर्ने देखिएको छ । तर पनि यो फोन महँगो, ठूलो र काम गर्न नसक्ने किसिमको हुनेछ । अहिले यसको नेटवर्क बनाउने कम्पनी फोन बनाउने कम्पनीभन्दा निकै पछाडि छ । फोरजी जस्तो मोडल निर्माणका लागि त केही वर्ष प्रतीक्षा गर्नुपर्छ भने फाइभजी झन् केही विशेष किसिमको रहनेछ । (एजेन्सीको सहयोगमा)
वीरेन्द्र सभागृहको ४ करोड फ्रिज हुँदै
काम सकिएको दुई साता नबित्दै उप्कियो कालोपत्र
जनता आवास कार्यक्रम : अन्तिम किस्ता पाएसँगै घर निर्माण तीव्र
सरकारी दाना उद्योग घाटामा
जलविद्युत्को शेयर निष्कासन निर्देशिका
बीमांकी अध्ययनको वास्तविकता : अत्यधिक कमाइ हुने क्षेत्र भए पनि किन आकर्षण देखिँदैन ?
किन आवश्यक छ कम्पनी नियमावली ?
बन्दको स्पोन्सर गरौं : व्यवसाय बढाऔं
प्रदेश–३ : ४७ अर्ब ६० करोडको बजेट, पूँजीगत खर्चमा ४८ प्रतिशत, कृषि ऋणमा ब्याज अनुदान